यी हुन् विश्वकै सुन्दर युवतीहरु हुने देश... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
यी हुन् विश्वकै सुन्दर युवतीहरु हुने देश…
एक वेवसाइटका अनुसार दश देशका युवीतहरु सबैभन्दा धेरै सुन्दर हुने मानिएको छ । लाटभिया र स्वीडेनका युवतीहरु सबैभन्दा धेरै सुन्दर हुने मानिएको छ । भारतले पनि यस सुचीमा स्थान बनाएको छ । आउनुहोस् हेरौ कुन देशका युवतीहरु कस्ता रहेका छन् ।
लाटभियाका युवतीहरु एकदमै सुन्दर हुने र यिनीहरु ब्लण्ड समेत हुने मानिन्छ । लाटभियाका युवतीहरुको बोल्ने कला पनि उत्तिकै सुन्दर हुने बताइन्छ ।
यस देशका युवतीहरुको आकर्षक व्यक्तित्व हुने गरेको छ । त्यस कारण पनि स्वीडेनका युवतीहरुलाई सुन्दर मानिन्छ ।
बाजिलियन महिलाहरुको स्पोर्टी लुकलाई धेरै मन पराइन्छ । यस देशका महिलाहरु हल्का र गहिरो दुवै रंगका युवतीहरु हुने गर्छन् । ब्राजिलका महिला धेरै व्युटी कन्टेस्टेन्टमा भाग लिने गर्छन् र अवार्डहरु पनि जितेका थुप्रै उदाहरण रहेका छन् ।
स्पेनका महिलाहरु मित्रताको व्यवहारले परिचीत छन् । उनीहरु कपडा तथा मेकअप निकै समझदारीका साथ प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
रुसका महिलाहरु सुन्दर आँखा र शरिरका लागि सुन्दर मानिने गर्छन् ।
अर्जेन्टिनाका युवतीहरु अलि रोमान्टिक हर्कत गर्न रुचाउँछन् । यस देशका युवतीहरु अग्ला हुने गर्छन् । व्युटी प्रतियोगितामा धेरै भाग लिने काम गर्छन् ।
७. दक्षिण अफ्रिका
दक्षिण अफ्रिकाका महिलाहरु धेरै सुन्दर हुने र स्पोर्टी लुक खाले शरिर हुन्छ ।
फ्रान्सका महिलाहरु उनीहरुको घमण्ड र सकारात्मक उर्जाका लागि परिचीत छन् । सकारात्मक सोच धेरै बनाउन खोज्ने भएका कारण पनि उनीहरु सुन्दर हुने बताइएको छ ।
भारतका महिलाहरु पनि सुन्दर युवतीहरु हुने सुचीमा परेका छन् । यस देशमा हरेक फिचर भएका युवतीहरु पाइने गर्छन् ।
इटालीका युवतीहरुलाई बेला पनि भन्ने गरिन्छ । उनीहरु देख्नमा गजबका सुन्दर हुन्छन् । उनीहरुमा फेशन सेन्स बढी भएको मानिन्छ । – एजेन्सी